Chọpụta ihe ị ga-ahụ na obodo Slovenia nke Ljubljana | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Ljubljana, Slovenia
Susana Garcia | | Getaways Europe, Slovenia
La Ljubljana obodo bu isi obodo Slovenia na obodo ya kachasị ukwuu. Amụrụ ya dịka ogige ndị agha Rome na narị afọ nke XNUMX BC. C. Ọ bụghị otu n'ime obodo ndị kachasị buo ibu na Europe, ya mere ọ ka na-enwekwa ọmarịcha amara na obere ebe dị jụụ.
Obodo a bụ kwupụtara Green City na 2016, ya mere obu isi obodo na elekota gburugburu anya. O nwere otutu oghere di iche-iche nke enwere otutu ihe ncheta. Yabụ ọ kachasị mma ileta na mmiri, mgbe anyị nwere ike ịpụ apụ.
1 Castlọ Ljubljana
2 Àkwà Mmiri Dragọn
3 Katidral St. Nicholas
4 Oghere Preseren
6 Ogige Tivoli
7 Ngosi ihe mgbe ochie na Ljubljana
El Ljubljana Castle bụ otu n'ime isi ihe kacha amasị n'obodo Slovenia. Ọ dị na mpaghara dị elu, na-achị obodo, dịka ọ na-eme na ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ. O chebela obodo ahụ kemgbe 1144, mana ụlọ elu anyị na-ahụ taa wuru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na narị afọ nke XNUMX. Ọnụ ụzọ nke nnukwu ụlọ ugbu a bụ site na akwa akwa narị afọ nke XNUMX. N'ime ị nwere ike ịga ọtụtụ n'ime oghere ya, dịka ụlọ elu nke ndị na-agba ụta, Erasmus Tower, Obí ma ọ bụ ụlọ dị iche iche. O kwere omume ileta akụkụ buru ibu nke mpaghara ya kpamkpam, n'agbanyeghị na ọ nwere ụlọ ohere maka agbamakwụkwọ na mmemme ugbu a.
Àkwà Mmiri Dragọn
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ akwa mmiri nke zuru oke na nke mara mma, ị ga-aga Akwa Bridge nke Dragons. A na-ejikwa dragọn anọ mara mma nke mara mma nke mara mma nke na-adọta ọtụtụ ndị njem nleta. Dragọn ahụ bụ akara nke Ljubljana ma na-anọchi anya ike. Akụkọ ya malitere site na Jason na Argonauts, ndị rutere obodo ahụ meriri nnukwu dragọn ahụ, nke ghọrọ ihe nnọchianya nke obodo ahụ.
Katidral St. Nicholas
Ọ bụ ụlọ ụka Romanesque bichiri ebe a. Ọkụ mere ka e wughachi ya n'ụdị ndị Gothic. Ugbua na narị afọ nke XNUMX a ụlọ na ụdị baroque. Agbanyeghị na mpụga anaghị adọta ọtụtụ elebara anya, eziokwu bụ na n'ime ọ ga-ekwe omume ịhụ frescoes mara mma nke Baroque. Ihe ọzọ kwesịrị ịrịba ama bụ ọnụ ụzọ ya dị n'akụkụ, nke a na-akọ akụkọ banyere Slovenia. E ji ọla kọpa kọwaa ọnụ ụzọ ndị a.
Obodo ọ bụla nwere Central square na bụ otu n'ime ya kasị ndụ ebe na ihe banyere Ljubljana bụ Preseren Square. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ime njegharị obodo, nke a bụ ebe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-amalite, yabụ ọ nwere ike ịbụ ebe zuru oke ịmalite ụbọchị ma gaa na obodo ahụ site na njem nlegharị anya. Ọ dị n'akụkụ osimiri na n'akụkụ aka nri nke Triple Bridge, nke bụkwa otu n'ime isi ihe mmasị ya. N'ebe a ka Franciscan Church of Annunciation nọ, nwere ọmarịcha ihu Baroque. Na square nwekwara ụfọdụ Ogwe ebe ị nwere ike inwe nri.
Central Market nke obodo nwere ụdị nke Renaissance na-akpali. Emere ya na 1940 ma taa, o ka bu ebe kachasi nma n'obodo. Ahịa ahụ bụ ụlọ nkwakọba ihe elongated nke dị n'akụkụ osimiri ahụ n'etiti Bridge nke Dragons na Triple Bridge, ya mere ọ dị nso na nleta ndị ọzọ dị mkpa. Na-esote ahịa ahụ, e nwekwara ụlọ ahịa ole na ole na-enye anyị ohere ịhụ onyinye ka ukwuu nke ngwaahịa mpaghara. Ọ bụ ebe zuru oke iji nwee ọ visitụ na nri ịkọ nri ma mara ụdị nri na ikuku nke obodo ahụ.
Na ezi obodo, enweghị ụkọ etiti na nnukwu ogige iji nwee ọmarịcha ije. Nke a bụ ogige Tivoli, ebe ị nwere ike ịga ije nwayọ ma ọ bụ mee egwuregwu ụfọdụ. N'ime ogige a enwere ike ịhụ ụlọ griin haus na enwere ọba akwụkwọ n'èzí, ebe igwu mmiri na mgbe ụfọdụ a na-eme ụfọdụ mmemme. Ọ bụ ebe a na-atụrụ ndụ nke kacha mma.
Ngosi ihe mgbe ochie na Ljubljana
Ọ bụrụ na anyị nọ n'ogige ahụ, anyị nwekwara ike ịhụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie atọ nke obodo ahụ. The Museum of Modern Art na-egosi anyị ọrụ nke ndị omenkà Slovenia nke narị afọ nke XNUMX. National Museum nwere ihe si n'akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ, yabụ n'ime ya anyị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkọ ihe mere eme Slovenia. Muselọ ihe ngosi nka ikpeazụ bụ National Gallery, nke ejiri rụọ ọrụ nka sitere na Middle Ages ruo ugbu a.
Nke a bụ agbataobi ọzọ nke ghọrọ ebe ịga leta maka igosi ọdịbendị dị n'okpuru obodo. Ọ bụ ebe ị ga-enwe ọ enjoyụ na ọnọdụ ọgbaghara na nka. Omenala a bụ oghere ịhụ n’obodo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ihe ị ga-ahụ na Ljubljana, Slovenia